Isicelo - I-Shanghai May Skin Information Technology Co, Ltd.
Uwoyela owedlulele uvela ezingxenyeni ze-sebaceous esikhunjeni ezikhiqiza i-sebum. Labo abanalesi simo bavame ukuba nesikhumba esikhanyayo nezimbotshana ezinkulu.
Izithombe ezithathiwe ze-UV Light nomphumela wezithombe ezitholiwe:
Imibimbi yimivimbo emikhulu, imiqulu, noma imiphetho esikhunjeni. Ngokuchayeka emisebeni ye-ultraviolet, ukuqina kwesikhumba kuyahlupheka noma i-elastin ne-collagen yehla, okwenza isikhumba somile futhi kuholele ekwandeni kwemibimbi. (I-Hyaluronan inamandla anamandla okumunca amanzi futhi ifinyelela izikhathi eziningana uma kugcinwa amanzi. Ngakolunye uhlangothi, noma kunjalo, uma amanzi elahlekile, ubuningi bawo buyancipha ngesilinganiso sezimpande eziyisikwele, izimpande zekhiyubhu, bese umbimbi kudalwe ngokwemvelo esikhunjeni).
Izithombe zokuhlola ezithathiwe nomphumela wezithombe ezitholakele:
Okuhlaza yimibimbi eyakhiwe, Okuphuzi yimibimbi eyakha ngokushesha
Isikhumba singabukeka simnyama lapho i-melanin pigment ikhiqizwa ngokweqile noma ilula uma ikhiqizwa kancane. Lokhu kubizwa nge- “pigmentation” futhi kubangelwa yimisebe ye-ultraviolet, ukutheleleka kwesikhumba noma izibazi.
Ukuqhamuka kombala ngaphakathi nangaphansi kwesikhumba.
Lapho lawa ma-orifices evinjelwa yizinwele, uwoyela nezimfihlo, ama-sebum anqwabelana ngemuva kwawo, okwenza amabala avele.
Kusukela ekushisweni yilanga kuya ekuziphatheni okweqile, kunezimo eziningi lapho isikhumba sakho singaba bomvu noma sicasuke. Kungenzeka ngoba igazi elengeziwe ligijimela esikhunjeni ukulwa nezicasuli nokukhuthaza ukuphulukiswa. Ukubomvu kwesikhumba nakho kungavela ekuzikhandleni, njengasemuva kweseshini yokuzivocavoca eshaya ngamandla inhliziyo.
Izindawo ezibomvu yizimpawu ezizwelayo
I-pore ukuvuleka okuncane okuncane kusendlalelo sesikhumba lapho izinhlayiya ezi-sebaceous zikhiqizwa khona ngoyili wemvelo womzimba. Usayizi wepore ungabukeka umkhulu uma; I-1) inani le-sebum ekususeni ebusweni esikhumbeni kusuka kwizindlala ezi-sebaceous ezixhunywe ne-follicle yezinwele iyanda 2) i-sebum nokungcola kunqwabelene ngaphakathi kwe-pore, noma i-3) udonga lwe-pore luba sagged futhi selulwe ukwehla kokuqina ngenxa yokuguga kwesikhumba.
Imibala yesikhumba somuntu ngokuhlukahluka kusuka kokumnyama kakhulu kuya kuma-hues akhanya kakhulu kungaboniswa ngethoni yesikhumba kanye nesikali seFitzpatrick. Into ebalulekile yombala wesikhumba yi-pigment melanin. I-Melanin ikhiqizwa kumaseli abizwa ngokuthi ama-melanocyte, kanye nesikhumba, futhi yisona sinqumo esiyinhloko sombala wesikhumba. Ngaphezu kwalokho, isikhumba esimnyama sithambekele ekubeni namaseli amakhulu enza i-melanin akhiqiza ama-melanosomes amaningi, amakhulu, aqine kakhulu, uma kuqhathaniswa nesikhumba esikhanyayo.
Umbiko ukhombisa ngomphumela wezithombe ezitholakele: